Suuqa Shiinaha ee loo yaqaan "Flooror" oo ah astaan ​​daadgureyn ah / luminescent guluubka guluubka ee warshadda baxsiga degdega ah iyo soosaarayaasha | Grand Luminous
Calaamadda tilmaamaha iftiinka ee dabaqyada Laydhka dhoobada dhoobada leh ayaa ah badeecad nal iftiin leh oo loo isticmaali karo aqoonsiga amniga iyo qurxinta dhismaha. Codsiga aagag kaladuwan waxay noqon karaan derbiga, sagxadda, jaranjarooyinka iyo shaqo farshaxan oo ku taal maktabadda. Qaar badan oo ka mid ah dhoobadayada iftiin ee iftiinka leh ayaa sidoo kale ku habboon dhismaha oo isku daray hab-socodkii caadiga ahaa ee shaqada iyo tikniyoolajiyadda casriga. Waxay soo bandhigaan saameynta iftiinka waarta, antiseptik, waarta, iyo xasilloonida kiimikada. Kadib…
Calaamadeeyaha hagaha iftiinka leh ee dabaqa
Calaamadda daadinta lakabka hoose ee daboolka leh
1.Xaraashka muraayadaha sawir-gacmeedka ee loo yaqaan 'luminescent ceramics sawirrada' Tiles waxaa laga soo saaray iyadoo lagu daray midabaynta sawirrada luminescent sawir ee habka soo saarista dhoobada caagga ah iyo galaaska. Marka la barbardhigo dhoobada caadiga ah iyo quraaradda, alaabada ayaa dhalaali kara mugdiga kadib markay nuugaan nalalka la arki karo, kuwaas oo ka dhiga dhoobada iyo isticmaalka muraayadaha si balaadhan.
5.Xaraashka sawir qaaduhu wuxuu sii deyn karaa hirarka iftiinka dherer gaar ah, oo xaddidi kara noocyada qaar-engeeg iyo cudurro. Sifeyntaani waxay la jaanqaadeysaa fikradaha nololeed ee moodada iyo caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka casriga ah ayagoo adeegsanaya badeecada jikada iyo qolka qubayska.
Hore: Midab deg deg leh oo midab leh liinta
Xiga: biyo-diidmada biyaha ee Photoluminescent-ka biyuhu